Uzigcwalisa Kanjani Ngokuphephile Izikhala Ezingafunwa Ngamathiphu E-I – SL Raw Virgin Hair LLC.
Uzigcwalisa Kanjani Ngokuphephile Izikhala Ezingafunwa Ngamathiphu E-I/Izixhumanisi Ezincane
Januwari 25, 2021
Ungakwazi yini ukugcwalisa izikhala ezingafuneki nge-i-tips micro links extensions ngaphandle kokuthi kubonakale kusobala?
Kungase kucasule futhi ngezinye izikhathi kube namahloni ukwazi ukuthi unezinwele ezizacile noma eziphukayo. Kodwa uthanda ukugqoka izinwele zakho ngaphandle (kungakhathaliseki ukuthi zisesimweni semvelo noma zikhululekile). Futhi ukhathazekile ngezandiso ezibonakala kakhulu njengoba zingabonakala, zibonise ngokusobala ukuthi empeleni ugqoke izandiso.
Kodwa leyo akuyona into okumele ukhathazeke ngayo ngezixhumanisi ezincane.
Laba ama-i-tips extension buhle bayiphupho lomthandi wezinwele uma kuziwa ekugcwaliseni izikhala ezinweleni zakho ezingase zivele ekulimaleni kwamakhemikhali okuholela ekuqhekekeni, ekuncipheni, noma nje ukuba nezinwele ezinhle.
Thenga Iqoqo Lesixhumanisi Esincane
Izixhumanisi ezincane ziyizandiso ezisebenzisa ubuhlalu obuncane obunamathisela izandiso ezinweleni zakho Kuhilela ukugoqa ubuhlalu obuncane obungezansi nje kwempande yezinwele zakho, ukufaka isandiso se-i-tip kubuhlalu, bese ubophisa ubuhlalu ukuze uvikeleke. i-tip ezinweleni zakho. Ukuqiniswa kwezinwele kuqinisekisa ukuthi izinwele zihlala endaweni ngaphandle kweglue noma ukuthunga.
Uma kwenziwa uchwepheshe noma uma uzijwayeza okwanele, lezi zandiso cishe azibonakali. Futhi banikeza ukubukeka okugcwele nokulinganiselayo ezindaweni ezinciphile noma eziphansi izinwele.
Ukugcwalisa izikhala ngezandiso zezixhumanisi ezincane ze-I-tip
Izandiso ze-Micro-link zezinwele ezinhle, ezincanyana kuyindlela ephephile yokuvala izindawo ezincane neziphukayo - uma ukwenza kahle Futhi kuhle kakhulu ukuthi izandiso zesixhumanisi esincane zifakwe umucu ngentambo ezingxenyeni zezinwele.
Indlela engcono kakhulu yokugcwalisa ngokuphephile izikhala ezingafuneki usebenzisa i-i-tips/micro links ukuzibeka ngaphandle. Awuzami ukwenza izandiso eziningi ngale ndlela.
Umane ukhomba izindawo ezizacile noma eziphukayo futhi wengeza izandiso kulezo zindawo.
Nansi ividiyo esheshayo ekukhombisa ukuthi ungayenza kanjani le nqubo ngaphandle kokulimala ezinweleni zakho.
(Lena akuyona ividiyo egcwele yokufaka, ukuthi ugcwalisa kanjani izindawo ngezinwele ezizacile noma eziphukayo.)
Kungani izixhumanisi ezincane zisebenza
Lezi zandiso zinhle kubantu abanezinwele ezizacile noma ezinhle. Ngakho-ke, ingakusebenzela uma unamabala azacile, aphukayo, noma anempandla ongathanda ukuwavala. Noma umane ufuna ukunikeza izinwele zakho umthamo nobude obuningi.
Uma kwenziwa uchwepheshe wesitayela, lesi sandiso singahlala izinyanga ngokulungiswa okuvamile (njalo emavikini ayisithupha kufanelekile). Lokhu kulungiswa kubheka ukukhula kwezinwele futhi kusiza ekuvimbeleni ukuhlangana, okungaba yinkinga kungakhathaliseki uhlobo lwesandiso sesikhathi eside osifakayo.
Futhi ngezinqubo zokunakekela izinwele ezinhle, ungavimbela noma yimuphi umonakalo ongenzeka ekugqokeni lezi zandiso.
Manje, ubuhle bezandiso ezifana nalezi esiziphethe kwa-SL Raw Virgin Hair ukuthi zingafakwa umbala ukuze zihlangane kahle nezinwele zakho.
Futhi unezinketho ze-kinky curly i-tips microlink extensions noma kinky straight i- amathiphu izandiso ze-microlink ezifana nohlobo lwezinwele zakho.
Ngakho-ke, ngeke udinge ukukhathazeka mayelana nezandiso ezihlangana nezinwele zakho.
Uma unezinkinga ngezinwele ezizacile noma eziphukayo, bese uzama le nketho yokunwetshwa kwezinwele futhi ubone ukuthi kulula kangakanani ukugcwalisa lezo zikhala ezingenalutho ngaphandle kohlakaniphe kakhulu
Tags: Beautifu Hair, Best hair looks, damaged hair, hair education, Hair facts, hair hacks, hair news, hair tips, hair tutorial, how to video, i-tips, itips, keratin tip, keratin tips, micro links, video, women hair